Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguKoidu
Ngomnyango wangasese uya kufumana igumbi lokulala eline-ensuite yokuhlambela kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-balcony enemibono phezu kwegadi enkulu kunye nentlambo engezantsi. Kumgangatho osezantsi uya kufumana ikhitshi laseKoidu apho unokonwabela isidlo sakusasa okanye okunye ukutya xa uceliwe. Unokwenza ibarbecue kwigadi eluhlaza ekhanyiswe lilanga okanye uphumle nje kwaye wonwabele iimbono zelali kunye nenqaba yayo yecawa yenkulungwane ye-18. Ukuba uthanda ubushushu obongezelelweyo phambi kokuba ulale, sinesauna yaseFinnish onayo.
Indlu endala yase-Italiya yalungiswa yaya kutsho kwimigangatho emitsha.
Idolophu endala yaseSerravalle incinci kodwa intle kakhulu kwaye inomtsalane ukuhambahamba. Uya kufumana ivenkile yokutya (kubandakanya i-tabbacchi) kunye nebhula emazantsi elali kwaye kukho iibhari ezininzi kunye neendawo zokutyela ukuba uzonwabele.
Kule ndawo uya kufumana izidiliya ezimangalisayo kunye neendawo zokutyela kunye nezinye izinto onokuzibona kwaye uzonwabele. Ndineengcebiso ezininzi kuwe.
Isixeko esikufutshane yiDogliani (10km) kunye neAlba (20km).
Kubathandi bewayini iMonforte d'Alba, iBarolo, iLa Morra, iSerralunga d'Alba zonke ziyi-10-15min yokuqhuba.
Kukho i-safari (izu eneengonyama kunye nezingwe) ngaphakathi kwe-10 km
Ulwandle lweMeditera luyi 65 km nje... 1h drive (port city Savona)
Ukuba uthanda ubumfihlo obupheleleyo ke nantso into oyifumanayo. Ukuba uthanda ukutya isidlo sakusasa okanye ukusebenzisa i-barbecue okanye i-sauna ngoko uya kufumana inqanaba elithile kunxibelelwano nabanini.